SOICARE oyi alụlụ humidifier diffuser 5.5L n'elu jupụta ultrasonic humidifier maka hypochlorous acid mmiri na-eji, China
Ala / Elu
600 A tụkwasịrị
1. Ogologo oge na ike humidifying: Nke a humidifier nwere nnukwu mmiri tank 5. 5L, alụlụ nwere ike ịdịru awa 20 na elu larịị, na 45 awa na ala larịị. Ọ dabara na nnukwu ụlọ ọrụ, ime ụlọ wdg.
2. Na efere ultrasonic atomizer pụrụ iche, akwa humidifier a maka mmiri hypochlorous acid site na iji, ị nwere ike iji ya maka disinfection mfe.
3. Ọ nwere ọrụ nke mmanụ dị mkpa dakọtara. Site na mgbakwunye ihe mgbakwunye na-esi ísì ụtọ, enwere ike ịgbakwunye mmanụ dị mkpa site na iji mmiri mmiri, na-enyere aka ịmepụta gburugburu izu ike ma melite ogo ụra gị.
4. Top dejupụta imewe, ọ dị mfe mejupụta. Nzube Top-Refill na-eme ka humidifier dị mfe iji jupụta ma hichaa n'enweghị nsogbu nke ịgbanye tank mmiri. Ọ ga - emechi mmechi mgbe mmiri gwụchara ma ọ bụ ọkwa mmiri daa.
5. Anyị humidifier nwere kemeghi alụlụ larịị button. Nwere ike ịgbanwe mpịakọta mpịakọta nke alụlụ site na imetụ bọtịnụ aka ma ị nwere ike ịnụ ụtọ ọmarịcha iru ala kachasị mma site na ịhazi iru mmiri gị kachasị mma.
6. workingda ọrụ na-erughị 35dB, ọ na-enye gị ebe dị jụụ. Gaghị enwe ụzụ ma ọbụlagodi mgbe ị na-etinye ya na nkwụsịtụ abalị gị.
7. Na nke a ultrasonic humidifier, ị nwere ike nweta 360 Celsius iru oru iru mmiri: Ọ nwere ike moisturize ikuku ruo 30H nke na-aga n'ihu ọrụ, 360 Celsius edo humidification, otú i nwere ike iku ume nke ọhụrụ ikuku ọbụna n'ebe dị anya site humidifier, na-esi isi ọhụrụ ikuku dika ino na oke ohia.
8. Karịa Humidifier: Dị ka humidifier na-abịa na 7 Agba Ikanam ọkụ kwesịrị ekwesị maka ụlọ, ụlọ ọrụ na ebe ọ bụla ịchọrọ itinye ya, ọ bụ onyinye kachasị mma maka ezinụlọ gị na enyi gị.
7 acha ọkụ ọkụ
280mL / awa
125mL / awa
Na-agwakọta mmanụ dị mkpa Antibacterial Nche Mkpa mmanụ maka Diffuser
SOICARE XNUMXL Cool Mist Aromatherapy Essential Oil HCIO Humidifier